သင်ကငှားရမ်းတဲ့ကားကလပ်နှင့်စတင်ရုံသာလျှင်သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည့်အရာများရှိသည်။ သင်၏ကားကိုတတ်နိုင်သလောက်ကြိုတင်ဘွတ်ကင်လုပ်ရန်သေချာစေရန်သင်ပထမ ဦး ဆုံးပြုလုပ်ရမည့်အရာဖြစ်သည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သင်ဘာငွေရှာမလဲ။ သင်၏ကားကိုအခြားတစ်ယောက်ယောက်အတွက်မဟုတ်ဘဲဘွတ်ကင်လုပ်ရန်အလားအလာရှိသောယာဉ်မောင်းများကိုဆွဲဆောင်မည့်စာရင်းတစ်ခုကိုသင်ဖန်တီးရန်လိုအပ်သည်။
တစ်ရပ်ကွက်အတွင်းကားများမျှဝေခြင်းတစ်အသိုင်းအဝိုင်းလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်တွင်ပေါက်စေမည်။ ဒါဟာတဦးတည်းမောင်းနှင်ခြင်းနှင့်သင်လိုချင်သောအခါ, နှင်ထုတ်ခြင်းကိုခံရခြင်းနှင့်သင်တို့အထဲ၌နှင်ထုတ်ခြင်းကိုခံရချင်သောကားကိုအတူပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေးသည်။ သငျသညျအခြို့သောငွေစုစေအဖြစ်အချို့သောငွေရှာနိုင်ကြသည်အဖြစ်ဤသည်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးရှိပါတယ်။ ဤနည်းအားဖြင့်, ကျနော်တို့အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ဘဝတွေကိုသို့ရောက်ရှိလာပြီအားဖြင့်ရည်မှန်းချက်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသိုင်းအဝိုင်းလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ကြသည်။ ကျနော်တို့ Ying ကဒုတိယအဖြစ်လူသိများကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်ကားတစ်စီးပိုင်ရှင်များ၏တဦးတည်းနှင့်အတူအတိုအင်တာဗျူးလုပ်ပေးရှိသည်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။ သူကတစ်ဦး Nissan ကား Tiida ကိုပိုင်ဆိုင်ပေမယ့်အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်တစ်စုံတစ်ဦးထံမှကားတစ်စီးငှါးခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကသူသွားလာရန်သူ၏ကိုယ်ပိုင်ကားကိုမသုံးခဲ့ပါဘူးအဘယ်ကြောင့်ထွက်ရှာတွေ့ချင်ခဲ့တယ်ဒါပေမယ့်အစားတခြားသူတစ်ဦးဦးထံမှငှါး၏။ "ကျနော့်ကားကိုအပြည့်အဝမှုကြောင့်၎င်း၏လူကြိုက်များဖို့ကြိုတင်ဘွတ်ကင်ခဲ့ပါတယ်နဲ့ကျွန်မအရေးတကြီးသူငယ်ချင်းတွေအိမ်သို့ငါ့ကိုယူရန်နောက်ထပ်ကားတစ်စီးကိုရှာဖွေခဲ့ရတယ်။ ငါသည်အလျင်အမြန်ဧရိယာ၌ငါ့လိုအပ်ချက်အစေခံမယ်လို့တစ်ဝေးကိုရှာဖွေနိုင်ခဲ့တယ်။ " သင်သည်အဘယ်သို့ငှားတဲ့ကားကလပ်ပေါ်တွင်သင်၏ကားကိုစာရင်းပြုစုလုပ်? ကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့ကျွန်မရထားသုံးပြီးမိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့အများကြီးသွားလာ; ကျွန်တော်တို့ကိုအများကြီးကုန်ကျ။ ဒါဟာဝေးလံခေါင်ဖျားဒေသများဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲသည်နှင့်များစွာကိုရထားနှောင့်နှေးလည်းကြုံတွေ့ကြပြီ။ ဤသည်ကားကိုဝယ်ခြင်းငှါကျွန်တော်တို့ကိုဦးဆောင်လမ်းပြအရာဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့ကားကိုသဘောပေါက်လာတဲ့အခါကျနော်တို့ကိုတောင်ပုံမှန်အလုပ်လုပ်ရက်ကအသုံးမပြုနေစဉ်တုန်းပဲငှားရမ်းထားနိုင်ပါတယ်; ကျနော်တို့ငှားတဲ့ကားကလပ်ပေါ်မှာစာရင်းပြုစုရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ ငှားနေတဲ့ကားကလပ်ပေါ်ကားကိုစာရင်းတစ်ခုမှာအဓိကအားသာချက်ယာဉ်အပေါငျးတို့သ running ကုန်ကျစရိတ်ဖုံးအုပ်အတွက်ကူညီပေးခဲ့ကြောင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါရပ်ကွက်အတွင်း supporting နှင့်၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များကိုအချို့ကိုတွေ့ဆုံကြီးမားတဲ့ပေါင်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်ငှားတဲ့ကားကလပ်ပေါ်တွင်သင်၏မော်တော်ယာဉ်စာရင်းအချိန်ကနေရရှိခဲ့ပါပြီခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ဘယ်လောက်သိကြပါသလား? ကျွန်ုပ်တို့၏ကားတစ်စီးပြီးခဲ့သည့်နှစ်ဇွန်လ၏တလအတွက်ဝယ်ယူခဲ့ပြီးကျွန်တော်တစ်ဦးရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်ငှားတဲ့ကားကလပ်ပေါ်မှာစာရင်း။ ဒီတော့ဝေးကျနော်တို့ဒါဝေးပြေးကုန်ကျစရိတ်အများစုကိုဖုံးလွှမ်းခဲ့သည့်ကြိုတင်စာရင်းသွင်း၏£ 1300 စေပြီ။ သငျသညျယောဟနျသထံမှငှားရမ်းထားကားနှင့်သင်၏အတွေ့အကြုံကဘာလဲ အဆိုပါကားကိုသာနှစ်အနည်းငယ်အဟောင်းကြီးအကြောင်းကို 30000 မိုင်ပြုမိခဲ့သည်။ ဒါဟာကောင်းစွာမောင်းနှင်ဖို့ကအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အောင်ထိန်းသိမ်းရန်နှင့်အလွန်ကောင်းသောအခြေအနေဖြစ်ခဲ့သည်။ ပိုင်ရှင်လက်သို့အပ်ခြင်းနှင့်လည်းငါတို့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားမှအနီးကပ်နေထိုင်ခဲ့အဖြစ်အားသွင်းစရာမလိုဘဲကိုအကြှနျုပျတို့မှကားတစ်စီးစုဆောင်း။ ကျွန်တော်တို့ကိုအကြားဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဟာအလွန်ရိုးရှင်းတဲ့အောင်ကောင်းသောဖြစ်ခဲ့သည်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ပိုင်ရှင်များ၏တဦးတည်းအနေဖြင့်နောက်တစ်ကြိမ်ကားငှားချင်ပါ့မလား ကျနော်တို့ဧကန်အမှန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Nissan ကား Tilda ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်တွေနဲ့လူကြိုက်များတဲ့ဖြစ်လာသည်နှင့်ကျွန်တော်တစ်စုံတစ်ဦးကပြီးသားငှါးပြီဆိုပါကအသုံးပြုနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေဘယ်လိုစဉ်းစားအနာဂတ်၌နောက်တဖန်ငှားရမ်းပါလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးအတွေ့အကြုံကိုကြီးနှင့်ကျွန်တော်နောက်တဖန်သင့်ရဲ့ရေကူးကန်ကနေကားတွေသုံးပြီးမျှော်လင့်နေပါတယ်။